नेपालमा यस्तो पनि छ…! १५ बर्षमै होटेल चलाउने भाईहरु ! [भिडियो हेर्नुहोस]
केहि गर्छु भन्नेलाई कामको कहिले पनि अभाब हुदैन भन्ने कुराको उदाहरण बनेका छन् दुइ बालक। १५ बर्षे २ बालकले गरेको स्वरोजगारले धेरैलाई प्रेरणा समेत दिने गरेको छ। सानै उमेरमा उनीहरुले गरेको कामलाइ सबैले तारिफ समेत गरेका छन्। यसै क्रममा अहिले उनीहरु भाइरल बनिरहेका छन्।
संघर्षलाइ जिबन मान्दै अघि बढी रहेका उनीहरु आफ्नो कामकै कारण अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल हुदै गैरहेका छन्। यसै बालक हरुको होटल मा पुगेर भाग्य न्यौपानेले उनीहरुको अनातार्बार्ता लिए। उनीहरुको सफलतालाइ बधाई दिदै भाग्यले एक महिना बराबरको सटर भाडा तिर्नका लागि भन्दै १५ हजार रुपया सहयोग समेत गरे। सुरुवाती समयमा सहयोग मिले कामलाई थप सहायता मिल्ने भन्दै भाग्यले सहयोग गरेका हुन्।
भर्खर मात्र १५ बर्ष पुगेका २ दाजुभाइले गरेको ब्यबसाय र परिश्रमको राम्रो तारिफ भैरहेको छ। उनीहरु हातमा हात राखेर काम छैन नेपालमा भन्ने हरुका लागि गतिलो उदाहरण बनेका छ्न। सानै उमेरमा पनि यी दाजुभाइ राजु र प्रबलले सबैको मन जितेका छन् । बालक हुदा देखिनै रामेछाप देखि भागेर काठमाडौ आएका उनीहरु अहिले मासिक लाखौ को कारोबार गर्छन त्यो पनि आफ्नै ब्यबसाय खोलेर। बाच्नका लागि संघर्ष गर्दै अघि बढिरहेका उनीहरु अहिले काठमान्डौ मा आफ्नै सानो होटल चलाएर लाखौको कारोबार गरिरहेका छन्।
बाकि हेर्नुस भिडियोमा